Tajaajilli Lammummaa maali? - BBC News Afaan Oromoo
Mootummaan Naannoo Oromiyaa sagantaa akka naannootti dhimmoota hojii tola ooltummaarratti xiyyeeffatu kan maqaa 'Tajaajila Lammummaa' jedhamuun beekamu labseera.
Sagantaan Tajaajila Lammummaa hojii tola ooltummaa kanaan dura ture qofa osoo hin taane bifa qindaa'een qajeeltoo mataasaa qabaatee kan raawwatamuudha jedhan Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Admaasuu Daamxoo.
Sagantaa Tajaajila Lammummaatiin namni hundinuu biyyasaaf waan danda'uu fi irraa eegamu kan gumaachu ta'ee hunduu akkaataa hirmaannaa isaatiin beekamtii argachaa deema jedhan Obbo Admaasuun.
Tajaajila Lammummaa hojiirra oolchuun dura sadarkaa Godinaa, Aanaalee fi Gandoota Oromiyaatti mariin hubannoo uumuu irratti xiyyeeffatee ni geggeeffamas jedhaniiru.
Tajaajilli Lammummaa kun Itoophiyaa keessatti yeroo duraaf Oromiyaa keessatti eegaluusaa kan dubbatan Obbo Admaasuun muuxannoon biyyoota addunyaa qooddatameera jedhan.
Birmannaa dargaggootaa haroo Xaanaa baraaruuf
Mootummaan Naannoo Oromiyaa humna namaa fi qabeenya uumamaa qabutti sirnaan fayyadamuun biyya badhaate ijaaruuf sagantaa Tajaajila Lammummaa labseera jedhan Obbo Admaasuun.
''Kanaan hojiin tola ooltummaa hedduun hojjetamaa turulleen kun garuu hojii itti fufiinsaan hojjetamuudha. Qajeeltoo mataasaatiin hoogganama. Dhaloonni amma jiru beekumsa, dandeettii fi humna qabu sirnaan duguugee itti fayyadamee egeree Oromiyaa ijaaruu keessatti ga'ee irraa eegamu akka gumaachuuf yaadameeti.'' jedhan.
Labsiin Tajaajila Lammummaa, Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin ragga'eera kan jedhan Obbo Admaasuun caasaa hojii isaas olaantummaadhaan caffeetu hooggana jedhan.
Dhaloota Duudhaa Sirna Gadaatti deebisuu
Oromoon durii ka'ee kan bulaa ture Sirni Gadaa duudhaalee siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee of keessaa qaba, dhaloota ammaas akkaataa duudhaa jalqabaatti deebisuun dirqama jedhu Obbo Admaasuun.
''Kaayyoo gooroon tajaajila lammummaa Oromoon akkaataa duudhaa sirna gadaatiin biyyasaaf akka tumsu gochuudha. Duudaalee sirna gadaa kan namni hundinuu guddina biyyaa keessatti ga'ee qabu cimsuudha''
''Akkaataa tajaajila lammummaa kanaan namni kamuu akka kutannoo agarsiiseen beekamtii argata, kanarraa kan ka'e namni hunduu biyyasaaf waa gumaachuuf jedhee dorgommii keessa gala, miira akkasii uumuuf hojjetama'' jedhan.
Uummanni Oromoo biyyasaa keessatti bilisaan tajaajila akka kennuu fi akka argatu ,bu'aa argamerraas haqaan akka fayyadamu gochuuf tajaajilli lammummaa hedduu murteessdha jedhu Obbo Admaasuun.
''Ummatichi ilaacha abbaa biyyummaasaa akka gabbifatuu fi ijaarsa biyyaa keessatti ga'eesaa akka gumaachuuf kallattii kan qabsiisu ta'a. Hawaasni naannoo keenyaa dhuunfaa fi gareen wayita hirmaatan hariioo isaanii cimsachuu fi beekumsa walirraa qooddachuufis ni fayyada'' jedhan.
Miirri tajaajila lammummaa nama hunda keessatti akka uumamuu fi kanaanis iddoo mootummaan hin geenyetti qaawwa uumame duuchuudhaafillee kan gargaaru ta'a jedhan.
''Walii galatti tajaajilli kennamu nageenyaa fi tasgabbiirratti, duudhaa Oromoo dagaasuurratti, Eegumsaa fi Kunuunsa naannoo, tajaajila fayyaa, barnoota, misoomaa fi ispoortiirratti ta'uu danda'a''
Image copyright Fuula FB Amaasuu Daamxoo
Tajaajila lammumma fi Dargaggoota Oromoo
Humni dargaggootaa fi qabeenya naannoo Oromiyaaf utubaadha kan jedhan Obbo Admaasuun Oromiyaan cimtuu taatee akka itti fuftuuf wantoota lamaan kanneen sirnaan itti fayyadamuu feesisa jedhan.
''Dhiibbaa siyaasaatiin humni dargaggootaa qisaasamaa ture gara hojiitti yoo galee Oromiyaaf tumse egereen Oromiyaa ifa. Kana milkeessuuf tajaajilli lammummaa barbaachise.''
Tokkummaa fi onneen dargaggoota Oromoo keessa jiru guddinaa fi badhaadhina Oromiyaaf akka oolu gochuun kaayyoo tajaajila lammummaa ta'uu kan ibsan Obbo Admaasuun sochiin uummata Oromoo hundinuu duudhaa ganamaa qabatee dhaloonni dhufus akka dhaalu gochuuf hojjetama jedhan.
Caasaa fi hirmaattota Tajaajila Lammummaa
Labsiin Tajaajila Lammummaa Caffee Oromiyaatti dhiyaatee ragga'e kun sadarkaa godinaaleetii hanga gandoota Oromiyaatti erga irratti mari'atamamee boodatti hojiitti hiikama jedhu Obbo Admaasuun.
Hojiitti seenuu dura waltajjiin hubannoo har'a sadarkaa Godinaatti eegalame hanga gandootaatti erga geggeeffamee booda manni maree hundaa'ee hojiin eegalama jedhan.
''Manni Maree Tajaajila Lammummaa kun sadarkaa naannootii hanga gandaatti hundeeffama. Kan naannoo walitti qabaan Pirezidaantii ta'uu danda'a.
Namoonni ogummaa adda addaa qaban biyyaa keessaa fi alaa hojii tola ooltummaa kanarratti hirmaachuu danda'u. Caasaan mana maree kun kutaalee hawaasaa mara kan of keessatti hammateedha. Hunduu hirmaachuuf mirgaa fi dirqama qaba.'' jedhan.
Manneen maree kun akkaataa humna dargaggootaa misoomaaf oolchuun danda'amurratti imaammata burqisiisa, kan hojiirra oolchummoo uummata jedhan.
''Itoophiyaa keessaa yeroo jalqabaaf Oromiyaa keessatti hojiirra oole''
Yaadrimeen Tajaajila Lammummaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaa Oromiyaa keessatti hojiirra ooluusaati.
Hanga ammaatti naannoleen Itoophiyaa keessa jiran kan yaada kana burqisiisanis ta'ee hojiirra oolchan hin jiran.
''Muuxannoowwan sadarkaa biyyaas ta'e sadarkaa addunyaatti jiranillee ilaallee jirra. Muuxannoon kun hanga ammaatti biyya keessa hin jiru. Sadarkaa Afriikaatti kan biyyoota muraasaa ilaalleerra.
Biyyoota addunyaarraas muuxannoo qooddanneerra. Muuxannoo sadarkaa biyyoota addunyaatti arganneen kan dirqama kaa'an jiruu, kan yeroo muraasa keessatti hojiirra oolchanii dhiisan jiruu, kan itti fufiinsaan hojiirra oolchanis jiru. Kan keenya kun sirna godhatee, beekumsa hawaasaa giddu galeessa godhatee, aadaa fi duudhaa hawaasaa irratti hundaa'ee kan bu'uureffameedha.'' jedhan.